အရက်: ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်အရက်အရက်၏အရက်သောက်ခြင်းဖြင့်ကူးစက်သောရောဂါနှင့်အတူအလိုဆန္ဒ-and ခံစားချက်၏အကျင့်, တစ်အဘိဥာဏ်ရောဂါဖြစ်ပါသည်။ အရက်ကျွန်အဖြစ်ထားရှိမည်စဉ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများချမှတ်ခြင်းအတွက် medium အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော်အရက်, စိတျဓာတျကမာစတာဖြစ်လာသည့်အခါရက်စက်ခြင်းနှင့်မဆုတ်မနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ချက်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုပြုသောအလိုတော်အဆိုပါ fiend ရင်ဆိုင်ရနှင့်အောင်နိုင်သို့မဟုတ်ကသိမ်းပိုက်ခံရဖို့ရှိသည်အခါ, ဒီသို့မဟုတ်အချို့သောအနာဂတ်အသက်တာ၌, အချိန်ကသာတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းကမသောက်ပါဘူးဆိုရင်ဒီအရက်, အန္တရာယ်ကင်းဖြစ်၏ ကသာအလတ်စားဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်တဲ့အခါမှာတဦးတည်းအချိုရည် t ကို, အရာအရက်၏ဝိညာဉ်ကိုလတ်သွေးထဲတွင်နှင့်အာရုံကြောအတွက် eeling နှင့်အတူအလိုဆန္ဒနှင့်အဆက်အသွယ်စေသည်ကြောင့်မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်, ဤယုံကြည်ချက်ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ပေါက်သောယုံကြည်ချက်ထဲသို့အလိုဆန္ဒနှင့်ခံစားမှု cajoles ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့သားကောင်ဦးဆောင်သည့်တလျှောက်မူး၏အားလုံးအဆင့်ဆင့်ကတဆင့် conviviality နှင့်ကောင်းမွန်သောမိတ်သဟာယဖွဲ့၏ဝိညာဉ်ဖြစ်၏။ အဆိုပါပြုသောနောက်ဆုံးမှာလည်းလူ့ပုံစံပေါ်တွင်ယူ depraved ဖြစ်ပါတယ်သောအခါ, fiend ကသတိ inertia အတွက် fixed သည်အဘယ်မှာရှိမြေကြီးတပြင်၏အတွင်းပိုင်းအောက်ဆုံးတွင်၎င်း၏အကျဉ်းထောင်ကဦးဆောင်နေသည်။ သတိ inertia မဆိုဘာသာရေးသို့မဟုတ်အခြားငရဲစိတ်ကူး၏အပြင်းထန်ဆုံးမီးလောင်ထက်ပိုသည်းခြေနှင့်ကွောဖြစ်ပါတယ်။ အရက်သဘောသဘာဝအတွက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏; ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုစောင့်သောအရာတဦးသေဆုံး။ မူး၏ဝိညာဉ်လူ့အတွင်းသိအလင်းကြောက်ရွံ့နဲ့လူ့ incapacitate ဖို့ကြိုးပမ်း။ သခင်နှင့်မအရက်သေစာ၏ဝိညာဉ်၏ကျွန်ဖြစ်ဖို့သာသေချာနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်: ကမြည်းစမ်းမထားပါနဲ့။ အခိုငျအမာနှင့်အဓိပ္ပါယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားကိုရှိသည်နှင့်ဆိုဟန်ဆောင်သို့မဟုတ်ပုံစံကိုအောက်မှာယူဖို့မထားကြ၏။ ထိုအခါတမာစတာဖြစ်လိမ့်မည်။
တစ်ဦးနာမတော်အဘို့အလိုဆန္ဒ, (Fame): တစ်ဦးပူဖောင်းကဲ့သို့အချည်းနှီးနှင့် evanescent ဖြစ်ကြသည်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများအတွက် indeterminate attribute တွေ၏ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုစပျစ်သီးပြွတ်ဖြစ်ပါတယ်။
သေမင်း၏ထုံးစံ။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုရည်မှတ်ခန္ဓာကိုယ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွအဘယျသို့တဦးတည်းအတွေး၏ရလဒ်အဖြစ်တဦးတည်းရဲ့အတိတ်ဘဝများကနေကျော်လာနှင့်ထိုဘဝအသက်တာ၌ပွုခဲ့သည့်အကြွေးများနှင့်ချေးငွေများ၏ဘတ်ဂျက်ဖြစ်ပြီး, တဦးတည်းပစ္စုပ္ပန်ဘဝ၌ကိုင်တွယ်ရန်ရှိပြီးအရာနှင့်အတူ။ တကိုယ်တည်းနှင့်ကိုကိုယ်စားပြုသောအရာကိုမလွတ်မြောက်နိုင်ပါ။ တဦးတည်းလက်ခံနှင့်အတိတ်ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ပြုမူဆက်လက်, ဒါမှမဟုတ်တစျခုတစျထင်နှင့်, ဖြစ်လုပ်ဖို့နှင့်ရှိသည်ဖို့အလိုတော်အဘယ်အရာကိုစအတိတ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်ရမည်ဖြစ်သည်။
အစိုးရ, ကိုယ်ပိုင်: ကိုယ်ပိုင်, မိမိကိုယ်ကို, လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဖြစ်ပြီးသူသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အော်ပရေတာသူသတိပြုသော၏ခံစားခကျြမြားနှငျ့အလိုဆန္ဒများများ၏ပေါင်းလဒ်သည်။ အစိုးရအနေဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်သောအားဖြင့်အခွင့်အာဏာ, အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ self-အစိုးရသို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်နှောင့်အယှက်မှဦးစားပေး, စွဲသို့မဟုတ်ကိလေသာမှတဆင့်နာမယူဘဲနေစေခြင်းငှါအရာတစျခုရဲ့ခံစားခကျြမြားနှငျ့အလိုဆန္ဒများ, ထင်နှင့်အခွင့်အရေးနှင့်အကြောင်းပြချက်နှင့်အတူပြုမူရသောအလိုရှိကြိမ်မြောက်တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပိုကောင်းခံစားချက်တွေကိုအားဖြင့်စဲခြင်းနှင့်ပဲ့ထိန်းခြင်းနှင့်အုပ်ချုပ်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်, အစားကိုခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကနေအာဏာပိုင်တွေကနေသောအာရုံ၏အရာဝတ္ထုကိုရည်မှတ်အကြိုက်နှင့်မကြိုက်ထိန်းချုပ်ထားခံရအတွင်းကနေအခွင့်အာဏာများစံချိန်စံညွှန်းများ, အဖြစ်။
ရောဂါအပြင်ပန်းအရာများ၏အတွေးများ၏ balancing ကြောင့်ထိခိုက်။ အကြောင်းရင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်, ရောဂါပျောက်။ ရောဂါ၏ငြင်းပယ်တစ်-ယုံကြည်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကရောဂါရှိကြ၏လျှင်အဘယ်သူမျှမငြင်းပယ်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ကနျြးမာရေးရှိသည်အဘယ်မှာရှိပြီးသားကဘာလဲဆိုတာအတည်ပြုခြင်းဖြင့်ရရှိခဲ့ဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးရိုးအလိုက်: ယေဘုယျအားဖြင့်တဦးတည်းရဲ့ဘိုးဘေးများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးတွေ, အချက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်မှကူးစက်နှင့်လူ့ဖြစ်လျက်ရှိနေဖြင့်အမွေဆက်ခံဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုမှနားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ ၏သင်တန်း, ဒီအကြောင်းမှာသွေးနှင့်မိသားစု၏ ဆက်စပ်. အချို့ဒီဂရီမှစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ရမည်။ ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး verity ရာအရပျမပေးသောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကခံစားချက်-and ဆန္ဒတစ်ခုနေိုငျပြုသော၎င်း၏ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်နေအိမ်သို့ယူနှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဓာတ်နှင့်အကျင့်စာရိတ္တဖြစ်စေသောဖြစ်ပါသည်။ နွယ်, မွေးမြူရေး, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အသင်းအဖွဲ့များအရေးကြီးလှသည်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုအညီကျင့်သောဤထံမှကိုယ်တိုင်ကခွဲခြား။ အဆိုပါပြုသော၏အသက်တော်-form ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်; ပုံစံကတော့စာစီယူနစ် furnishes နှင့်အသက်ရှု၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံထဲသို့မိခင်အားဖြင့်နှစ်ဆယ်ကိုပစ္စည်းထုတ်တည်ဆောက်နှင့်ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်အသက်ရှူ-form ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံတည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းနည်းဆက်လက်
သဘာဝတရား၏အလငျးရောငျ: လူ့အလောင်းတွေအတွက်ကိုကျင့်သောသူသာလျှင်အားဖြင့်သဘာဝသို့စလှေတျတျောကိုသိတတ်သောအလင်းဆီသို့သဘာယူနစ်များ၏ပေါင်းစပ်၏ထွန်းလင်း, sparkling, အရောင်အဝါသို့မဟုတ်တောက်ပနေအဖြစ်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Link ကိုယူနစ်, တစ်ဦးက Breath-: ဖမ်းမိခြင်းနှင့်တောက်ပသောအမှုယာယီယူနစ်ရရှိထားသူများနှင့်အသက်တော်သည်၎င်း၏ဆဲလ်၏ဘဝ-link ကိုယူနစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်သောအားဖြင့်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။
Link ကိုယူနစ်, တစ်ဦးက Life-: ဖမ်းမိခြင်းနှင့်အသက်တာသည်၎င်း၏၏ပုံစံ-link ကိုများနှင့်အသက်ရှု-link ကိုယူနစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်သောအားဖြင့်လင့်ခ် airy ကိစ္စ၏ယာယီယူနစ်ရရှိထားသူများနှင့်ဖြစ်ပါသည်
Link ကိုယူနစ်, တစ်ဦးက Form-: ဖမ်းမိခြင်းနှင့်အရည်ကိစ္စ၏ယာယီယူနစ်ရရှိထားသူ, နှင့်၎င်း၏ဆဲလ်များ၏ဆဲလ်-link ကိုများနှင့်ဘဝ-link ကိုယူနစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်နေသည်။
Link ကိုယူနစ်, တစ်ဦးက Cell-: ဖမ်းမိခြင်းနှင့်အစိုင်အခဲအမှုယာယီယူနစ်ရရှိထားသူများနှင့်အရာအားဖြင့်ကပိုငျဆိုငျသောကိုယ်ခန္ဓာ၏အင်္ဂါသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအခြားဆဲလ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်နေသည်။
"ပျောက်ဆုံးသွားသော Soul" A: အဘယ်အရာကိုတစ်ဦး "ဆုံးရှုံးခဲ့ရဝိညာဉျသ" ဟုခေါ်သည် "အသက်" မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်ပြုသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၏အဘို့ကိုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ပျောက်ဆုံးသို့မဟုတ်ယင်း၏ Re-တည်ရှိခြင်းနှင့်ပြုသော၏အခြားဝေမျှအမျိုးမှပယ်ရှင်း, သာယာယီအပြီးအပိုင်သည်မဟုတ်, ။ ကိစ္စနှစ်ခုထဲကတစ်ခုထဲတွင်ကျင့်သောအဘို့ကိုအချိန်ကြာရှည်စွာမှတဆင့်အစွန်းရောက်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်အတွက်တည်မြဲမှုနှင့်အလင်း, တမင်လိမ်လည်မှုအတွက်ကြောင့်မှအခြားသူများအားလူသတ်မှု, ပျက်စီးခြင်း, ဒါမှမဟုတ်ရက်စက်ပစ္စည်းများကိုငှါးရမ်းပေးသည်နှင့်လူသားတို့အားရန်သူဖြစ်လာခဲ့ပါသည်အသုံးပြုသောအခါ, ဒီဖြစ်ပျက်။ ထိုအခါအလင်းဆုတ်ခွာနှင့်ပြုသောအဘို့ကို re-တည်ရှိရန်တာတွေရပ်စဲလျက်ရှိ၏ အဲဒါကိုကိုယ်နှိုက်ကုန်အထိ Self-ဝမ်းနည်းကိုမြေကြီးအပေါ်ယံလွှာ၏အိမ်တော်အတွင်းခန်းထဲသို့အနားယူနှင့်အဲဒီနောက်မွကွေီးပျေါမှာပြန်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကျင့်သောအဘို့ကိုအပျြောအပါး, စားကွူးခွငျး, အချိုရည်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး Self-အလိုလိုကျလှနျးခွငျးမှတဆင့်အလင်းလျော့ခြင်း, နောက်ဆုံးမှာတဖန်မပျောက်နိုင်သောလူထုံဖြစ်လာခဲ့ပါသည်အခါဒုတိယကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ထိုပြုသောအဘို့ကိုမွကွေီးပျေါမှာအခန်းထဲသို့ဝင်။ ၎င်း၏ Re-တည်ရှိဆက်လက်ခွင့်ပြုထားနိုင်ပါတယ်သည်အထိရှိပါတယ်ကြောင့်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးမှာအငြိမ်းစားယူတခြားသူတွေ၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဖြစ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အဘို့ဖြစ်၏။
မတ်ေတာသညျ: ကမ္ဘာ့မှတဆင့်အသိပညာပေအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, လူ့အတွက်ကျင့်ဖို့ကခံစားချက်ကို-and ဆန္ဒနှင့်မိမိကိုယ်ကိုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုများ၏အလိုဆန္ဒ-and ခံစားမှုအခြားနှင့်သကဲ့သို့နှင့်အခြားကဲ့သို့ဖြစ်၏။
ကျင့်သောသူသာလျှင်မေတ္တာ: သောအသီးအသီးခံစားချက်တွေကိုခံစားမှု-and ဆန္ဒအကြားမျှတတဲ့ပြည်ထောင်စုနှင့်အပြန်အလှန်၏ပြည်နယ်, တစ်ခုဖြစ်ပြီးဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကအလိုရှိနှင့်အခြားသောနှင့်အမျှကိုယ်နှိုက်သည်။
မုသာစကားကိုနှင့်မရိုးသားမှု: မရိုးမသားဖြစ်ဖို့နဲ့အိပ်ရရန်အလိုဆန္ဒဘေး၏အထူး pair တစုံပါ၏ သူတို့အတူတူသွားပါ။ မရိုးမသားဖြစ်ခြင်းနှင့်အိပ်ကိုရွေးယူသောသူသည်သူတို့ဖြစ်ကြသည်နေသမျှကာလပတ်လုံးအတွေ့အကြုံများပြီးနောက်ဘဝတွေကိုတဆင့်အမှုအရာကိုတွေ့မြင်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သူတစျဦးဖွစျသညျ
သူလေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်သောအရာကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်မမှားနိုင်တဲ့သိရသည်။ သူကပိုပြီးအထူးသဖြင့်လူများ၏အဆိုးဆုံးနှစ်ဖက်မမြင်စဖူးနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်မိစ္ဆာဆရာတို့ဖြစ်ကြပြီးမရိုးမသားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, များသောအားဖြင့်ရိုးသားဖို့ယုံကြည်သည်နှင့်သစ္စာဝါဒီဖြစ်ကြောင်းသောသူတို့မူကားမရိုးသားမှုတက်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်နှင့်၎င်းတို့၏မုသာစကားကိုဖုံးကွယ်ဖို့လုံလောက်တဲ့သာလိမ္မာပါးနပ်ဖြစ်ကြကြောင်းကိုမိမိကိုမိမိယုံကြည်လျက်ရှိသည်။ ဒါကနိဂုံးချုပ်မုန်းတီးမှုနှင့်လက်စားချေခြင်းနှင့် Self-အကျိုးစီးပွားမွေးဖွားခဲ့ရတယ်; နှင့်တဦးတည်းအနေနဲ့လုံးလုံးလြားလြားရာဇဝတ်မှုအဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပညာသတိရှိသောအဖြစ်, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တစ်ခုရန်သူဖြစ်လာ
မိမိအားသာချက်ဘို့အခြားသူတွေဆန့်ကျင်သတိထား plotter ။ သို့သော်တဦးတည်းဖြစ်အံ့သောငှါလောကီသားကြီးမြတ်တဲ့ကျိန်စာကသူ၏ကြမ္မာအဖြစ်သူ၏အကြံအစည်နောက်ဆုံးမှာလောကီသားနှင့်မိမိကိုယျကိုမှသူ့ကိုဖော်ပြပါလိမ့်မည်။ သူကအချိန်အတွက်ရိုးသားမှုနှင့်နျကနျကွောငျးအတွေးနှင့်အရေးယူကိုယ်ပိုင်အသိပညာဖို့လမ်းကိုပြသကြောင်းလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ငြိုး:နေမကောင်း-အလိုတော်နှင့်အခံစားနေရပြီးဖြစ်ပေါ်စေရန်, ညှဉ်းဆဲရန်ဘေးဥပဒ်ကိုရည်ရွယ်၏ဝိညာဉျအားဖြင့်စွဲလျက်ရှိ၏ ဒါဟာကောင်းသော-အလိုတော်နှင့်ညာဘက်အရေးယူမှုမှရန်သူဖြစ်တယ်။
အမူအကျင့်: ကောင်းသောအမူအကျင့်ကိုကျင့်သောသူသာလျှင်၏ဇာတ်ကောင်အတွက်မွေးရာပါပါ၏ သူတို့ grafted မဟုတ်ဘဲတီထွင်နေကြပါတယ်။ အပေါ်ယံအရောင်အသက်တာ၌ပြုသောရဲ့အနေအထားကိုဖြစ်နိုင်သည်သမျှ, ကောင်းမကောင်းအမူအကျင့်၏မွေးရာပါအရည်အသွေးကိုဖုံးကွယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒီကိစ္စကို: ပစ္စည်းဥစ္စာ Triune တည်အဖြစ်အသိဉာဏ်ယူနစ်ဖြစ်တိုးသောသဘာဝအဖြစ်သတိမရှိသောယူနစ်အဖြစ်ထင်ရှားနှင့်နေသည်။
အလတ်စား, တစ်ဦးက: ရုပ်သံလိုင်း, နည်းလမ်းများ, ဒါမှမဟုတ်အစီးအနင်းအဓိပ်ပာယျအထွေထွေအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာအဘယ်သူ၏တောက်ပသို့မဟုတ် astral ခန္ဓာကိုယ်အများအပြားသဘောသဘာဝ sprite များနမူနာဒြပ်စင်ဒါမှမဟုတ်အပြီးအသေခံပြည်နယ်နှင့်သောလူနေမှုရှာအံ့သောငှါအတွက်လှည့်လည်သူမြားကိုမဆိုဆွဲဆောင်သည့်လေထု exudes နှင့် radiates ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါအလတ်စားအရှင်ထိုကဲ့သို့သောတဦးတည်းနှင့်လူ့အလောင်းတွေအတွက်ပြုသောအကြားဆက်သွယ်ရေးတစ်ခုနည်းလမ်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
မှတ်ဉာဏ်: ထင်မြင်ယူသောစသဖြင့်တစ်ဦးအထင်အမြင်၏မျိုးပွားဖြစ်ပါတယ်။ အသိ-မှတ်ဉာဏ်နှင့်ပြုသော-မှတ်ဉာဏ်: နှစ်ခုကိုမှတ်ဉာဏ်မျိုးရှိပါတယ်။ မျက်မှောက်မှတ်ဉာဏ်မှတ်ဉာဏ်, အရသာမှတ်ဉာဏ်ကြားနာ, နှင့်မှတ်ဉာဏ်အနံ့: အသိ-မှတ်ဉာဏ်၏အဲဒီမှာလေးအတန်းဖြစ်ကြသည်။ လေးပါးအာရုံ၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအသီးအသီးအစုံကကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သော၏ဒြပ်စင်များ၏ဆွဲဆောင်မှုကိုယူပြီး, နှင့်တွေ့ကြုံမှတ်တမ်းတင်ထားသောထားတဲ့အပေါ်ကြောင်းဖို့ဆွဲဆောင်မှုထုတ်လွှင့်ဖို့စီစဉ်သည်, အရာအားဖြင့်သူတို့ကပြန်ထုတ်ပေးပြီး; လူ့အတွင်းကအသက်ရှု-ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးအထင်အမြင်များ၏မျိုးပွားတဲ့မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ဉာဏ်, Doer-: ၎င်း၏လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ, သို့မဟုတ်ပါကဤအမွကွေီးပျေါမှာနေထိုင်ခဲ့ထားပြီးယခင်အလောင်းမဆို၎င်း၏ခံစားမှု-and ဆန္ဒ၏ပြည်နယ်များရဲ့မျိုးပွါးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပြုသောတွေ့မြင်သို့မဟုတ်စကားကိုနားထောငျသို့မဟုတ်အရသာသို့မဟုတ်အနံ့မထားဘူး။ ဒါပေမယ့်မြင်ကွင်းများ, အသံအရသာ, နှင့်ကျင့်၏ခံစားချက်-and ဆန္ဒအပေါ်တုံ့ပြန်နှင့်နာကျင်မှုသို့မဟုတ်အပျော်အပါး, ဝမ်းမြောက်သောစိတ်သို့မဟုတ်ဝမ်းနည်းခြင်း, မြော်လင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်, gaiety သို့မဟုတ်မှောငျထုတ်လုပ်ရန်ထွက်သက်-ပုံစံပေါ်တွင်သဘောကျသောအနံ့။ ဤရွေ့ကားခံစားချက်တွေကိုကြောင့်ကြုံတွေ့ခဲ့သောရတာဟာသို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါ၏ပြည်နယ်ပြုသော-အမှတ်တရများဖြစ်ကြသည်။ ကျင့်-မှတ်ဉာဏ်လေးအတန်းရှိပါတယ်: စိတ်ပညာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ပစ္စုပ္ပန်ဘဝ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များမှခံစားချက်-and ဆန္ဒ၏တုံ့ပြန်မှုနေသော; ၏တုံ့ပြန်မှုသောအဘိဥာဏ်အမှတ်တရများ,
ဟောင်းတဦးဘဝအသက်တာ၌တွေ့ကြုံအလားတူအခြေအနေများကြောင့်ဖြစ်သောအဘို့သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်သောနေရာများနှင့်အမှုအရာ, ရန်ခံစားချက်-and ဆန္ဒ; စိတ်ပညာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှတ်တရများ, အမှားအမှန်၏ထားတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုမေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၏ဖြေရှင်းနေကြသည်သို့မဟုတ်
အသက်တာ၏ရုတ်တရက်သို့မဟုတ်မမျှော်လင့်ဘဲအခြေအနေများများ၏အခြေချ; အချိန်ခဏအတွင်းပျောက်ကွယ်သွားခြင်းနှင့်ပြုသော timeless ဝိသေသလက္ခဏာ၎င်း၏အထီးကျန်မသိသောအခါဝိသေသလက္ခဏာများ၏အသိပညာစိုးရိမ်ရသောနှင့်စိတ်ပညာ noetic မှတ်ဉာဏ်,
မှတ်ဉာဏ်, Sense-: ပုံယူခံရဖို့ဖြစ်သည့်နှင့်အတူကင်မရာသကဲ့သို့, မျက်စိ၏ (က) အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကပါဝင်ပတ်သက်; (ခ) ကြည်လင်သောမြင်တတ်သောနှင့်အာရုံစူးစိုက်ပြုရမည်ဖြစ်သည့်နှင့်အတူမျက်မှောက်၏အဓိပ္ပာယ်; (ဂ) ပုံသဘောကျပြီးဖြစ်သည်နှင့်အရာကနေပုံတစ်ပုံကိုပြန်ထုတ်ဖို့အတော်လေးသည်အနုတ်လက္ခဏာသို့မဟုတ်ပန်းကန်ထားတဲ့အပေါ်; နှင့် (ဃ) အာရုံစူးစိုက်မပုံကိုယူသောသူ။ မျက်မှောက်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ၏အစုကိုမြင်တတ်သောအတွက်အသုံးပြုသောစက်မှုယန္တရားဖြစ်ပါတယ်။ မျက်မှောက်အသက်တော်-ပုံစံ၏ပုံစံကိုအာရုံစိုက်ဟာဆွဲဆောင်မှုသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံထုတ်လွှင့်ရန်အသုံးပြုသည့်ကို elemental သဘောသဘာဝယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပြုသောင်း၏သက်တော်-ပုံစံပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက်ပုံရိပ် မိ. အဘယ်သူသည်ပရောဖက်သည်။ ကြောင်းရုပ်ပုံများ၏မျိုးပွားသို့မဟုတ်မှတ်ဥာဏ်အလိုအလျှောက်သည်နှင့်နည်းစနစ်ကိုအောက်မေ့ဖို့ရာဝတ္တုတွေနဲ့ပေါင်းသင်းနေဖြင့်ပြန်ထုတ်ပေး။ အခြားမည်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှောင့်ယှက်ခြင်းသို့မဟုတ်လွယ်ကူသောမျိုးပွားသို့မဟုတ်မှတ်ဥာဏ်ကာကွယ်ပေးသည်။ မြင်နေများအတွက်မျက်မှောက်နှင့်၎င်း၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်အတူသကဲ့သို့, ကအမှတ်တရများအဖြစ်ကြားနာခြင်းနှင့်အရသာနှင့်အနံ့, သူတို့၏ပုံတူနှငျ့အတူရှိ၏။ မြင်လျှင် optical သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံပြပွဲမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်၏ , ထိုအာရုံသို့မဟုတ်အသံဒီဇိုင်းမှတ်ဉာဏ်ကြားနာ; အရသာ, အ gustatory မှတ်ဉာဏ်; နှင့်ယင်း olfactory မှတ်ဉာဏ်အနံ့။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်မည်:One ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားကိုဘဝအပေါ်တဦးတည်းရဲ့အမြင်ရှိ၏ ဒါဟာလဲဖြစ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လုပ်ဖို့သို့မဟုတ်တစ်ခုခုရှိသည်ဖို့အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်ကိုနဲ့လေထုကဲ့သို့ဖြစ်၏။ မိမိအစိတ်ပိုင်း set ကိုသီးခြားနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်အရာတစ်ခုခုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခန့်ယူဆောင်သောဖြစ်ပါသည်သမျှဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်လုပ်နေတာသို့မဟုတ်ရှိခြင်းအတွက်ဆိုလိုသည်။
Metempsychosis: အဆိုပါပြုသောတရားစီရငျ၏ခန်းမနှင့်အသက်ရှု-form ကို left နှင့်၌တည်ရှိ၏နှင့်အဲဒါကိုပျော်ရွှင်စေရာသည်၎င်း၏ပိုကောင်းလိုဆန္ဒများခံစားနေရပြီးစေရာသည်၎င်း၏အလိုဆန္ဒများ၏သူတို့ကိုခွဲခြားဘယ်မှာ purgation ၏လုပ်ငန်းစဉ်, ဖြတ်သန်းလျက်ရှိသည်ပြီးနောက်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ဤအမှုကိုပြုသောအခါ Metempsychosis အဆုံးသတ်ထားသည်။
စိတ်ထဲ: အသိဉာဏ်-ကိစ္စများ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာထောက်လှမ်းရေး၏အလင်းနှင့်အတူခုနစျပါးစိတ်, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ, အ Triune ကိုယ်ပိုင်အားဖြင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်ခုနစ်မျိုးတို့ဖြစ်ကြသည်, -yet သူတို့တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ အားလုံးခုနစ်မျိုးတှေးအချေါမြား၏ဘာသာရပ်အပေါ်တဖြည်းဖြည်းအလငျးကိုကိုင်ထားရန်, သောတဦးတည်းနိယာမအတိုငျးလုပျဆောငျဖို့ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်: I-သမီးနှင့် knower ၏ self ၏စိတျ၏စိတျ; အခွင့်အရေးနဲ့တွေးခေါ်၏အကြောင်းရင်း၏စိတျ၏စိတျ; ခံစားချက်နှင့်ပြုသော၏အလိုဆန္ဒ၏စိတျ၏စိတျ; နှင့်သဘောသဘာဝအဘို့နှင့်သာသဘောသဘာဝများအတွက်ပြုသောအားဖြင့်လည်းအသုံးပြုပါသည်သောခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ထဲ။
အဆိုပါဝေါဟာရကို "စိတျ" ဒီမှာအရာတွေနဲ့သို့မဟုတ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြုလေသောကြောင့် function ကိုသို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်ကိုသို့မဟုတ်အရာအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ဒါဟာခုနစျပါးစိတ်ထဲတွင်ဒီမှာအထွေထွေအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပြီး, ခုနစျပါး၏အသီးအသီးတို့သည် Triune ကိုယ်ပိုင်များ၏တွေးခေါ်၏အကြောင်းပြချက်ခြမ်းသည်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်အတှေးအချေါမြား၏ဘာသာရပ်အပေါ်သိအလင်း၏တည်ငြိမ်ကျင်းပနိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ self အဘို့ငါ-သမီးနှင့်စိတ်ကိုများအတွက်စိတ် Triune ကိုယ်ပိုင်များ၏ knower ၏နှစ်ဖက်အားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ အခွင့်အရေးနှင့်အကြောင်းပြချက်၏စိတျများအတွက်စိတ် Triune ကိုယ်ပိုင်များ၏တွေးခေါ်အားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ အဆိုပါခံစားချက်-စိတ်နှင့်ဆန္ဒ-စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ပြုသောအသုံးပြုသောခံရဖို့ရှိပါတယ်: ခန္ဓာကိုယ်နှင့်သဘောသဘာဝကနေခံစားမှုနှင့်အလိုဆန္ဒခွဲခြားရန်နှင့်မျှတသောပြည်ထောင်စု၌သူတို့ကိုရှိသည်ဖို့ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကို; ကိုယျခန်ဓာ-စိတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်နှင့်သဘောသဘာဝရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်းများအတွက်လေးအာရုံ, မှတစ်ဆင့်အသုံးပြုနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
စိတ်ကိုက The Body-: ကိုယျခန်ဓာ-စိတ်အစစ်အမှန်ရည်ရွယ်ချက်ခံစားမှု-and ဆန္ဒ၏အသုံးပြုမှုသည်လေးပါးကိုအာရုံ၏နည်းလမ်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကလေးပါးကိုကမ္ဘာပဲ့ပြင်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ရန်အဘို့အဂရုစိုက်ဖို့နဲ့ကိုယျခန်ဓာကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်။ အဆိုပါခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ကိုသာအာရုံမှတဆင့်နှင့်အာရုံနှင့် sensuous ကိစ္စမှကန့်သတ်စည်းကမ်းချက်များ၌ထင်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအစားထိန်းချုပ်ခံ၏, ကိုယ်ခန္ဓာကို-စိတ်ကိုထိန်းချုပ်မှု feeling-and ဆန္ဒသူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှသူတို့ကိုယ်သူတို့ခွဲခြားနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒါနှင့်ခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ထဲဒါကြောင့်သူတို့အစားထဲမှာ၏အာရုံ၏စည်းကမ်းချက်များ၌စဉ်းစားရန်အနိုင်အထက်ဖြစ်ကြောင်းသူတို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်လက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ် ခံစားချက်-and ဆန္ဒမှကိုက်ညီအသုံးအနှုန်းများ။
စိတ်ကိုက The Feeling-: ယင်း၏လေးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသည်နှင့်အညီ, ခံစားချက်ထင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားအမြင်, Concept, Form နှင့်စီမံကိန်းများကိုဖြစ်ကြသည်။ မျက်မှောက်, ကြားနာ, အရသာနှင့်အနံ့: အစားကျွန်ခံခြင်းမှသဘာဝမှကိုယ်နှိုက်၏လွတ်မြောက်ခြင်းအတွက်ဤသုံးဒါပေမယ့်သူတို့လေးယောက်အာရုံမှတဆင့်သဘာဝအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ထဲမှတဆင့်ထိန်းချုပ်ထားရသည်။
စိတ်ကိုက The Desire-: အရာအလိုဆန္ဒစည်းကမ်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုခံစားမှုနှင့်ကိုယ်နှိုက်ရန်အသုံးပြုသင့်သည်, ထိုသို့ထားတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကနေအလိုဆန္ဒအတိုင်းကိုယ်နှိုက်ကခွဲခြားရန်, နှင့်, ခံစားမှုနှင့်အတူသူ့ဟာသူ၏ပြည်ထောင်စုအကြောင်းကိုဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်း, ဒါကြောင့်အစား, ကိုယ်နှိုက်ဖို့လက်အောက်ခံနှင့်အသိတရားများနှင့်သဘာဝအရာဝတ္ထုမှဝန်ဆောင်မှုအတွက်ခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားခံရဖို့ဖြစ်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ်ကျင့်တရား: ဘာလုပ်ရမှန်းသကဲ့သို့လုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဘယျသို့အရာမှာတဦးတည်းရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုစိတ်နှလုံးထဲမှာယုံကြည်ချက်ကြောင့်များ၏ soundless အသံဖြင့်ပဲ့ထိန်းသောဒီဂရီငှါ၎င်း, အကြောင်းပြချက်၏အသံတရားသဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်သည်နေကြသည်။ ထို့နောက်အာရုံ၏သှေးဆောငျသျောလညျးတစျဦးရဲ့အမူအကငျြ့မိမိကိုယ်ကိုရိုသေလေးစားမှုနဲ့တခြားသူတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားအတူ, ရိုးနှင့်လက်ျာဘက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ One ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားတစျဦးရဲ့အစိတ်ပိုင်းသဘောထားကို၏နောက်ခံဖြစ်လိမ့်မည်။
ဘာသာရေး: အတွက်ယုံကြည်ချက်သို့မဟုတ်ဘုရားသခင်နှင့်အတူသဟာယများအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုဘာဝနာအားဖြင့်ဒါမှမဟုတ်အနီး၏ရှေ့မှောက်တွင်သို့မဟုတ်ဘုရားသခင်နှင့်အတူကွန်မြူနတီကြုံနေရအသုံးပြုပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးသောလူမြိုးနှင့်ဘာသာတရား၏ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အချို့အဘယ်သူမျှမကအထူးဘာသာတရားကိုရှိသည်။ သူတို့ရဲ့နည်းလမ်းများသို့မဟုတ်အလေ့အထများတိတ်ဆိတ်အတွက်တိတ်ဆိတ်ထံမှအကြမ်းဖက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အာမေဍိတ်ဖို့နဲ့တစ်ဦးချင်းစီကိန်းအောင်းရာကနေဒြပ်ထုဆန္ဒပြပွဲမှခြားနားသည်။ ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ယုံကြည်ချက်အတွက်များသောအားဖြင့်ရိုးသားဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့၏ဝခုနှစ်တွင်တည်းဟူသောစားဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအထွဋ် beatific မှရုတ်တရက် ecstasy ထနှင့်စိတ်ကျရောဂါ၏နက်နဲသောပင်လယ်သို့နစ်မြုပ်မည် ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုအကျဉ်းသို့မဟုတ်ကြာရှည်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ဤခံစားချက်များကိုနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုသာအတှေ့အကွုံဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်၏ရလဒ်များကိုမဟုတ်; သူတို့သညျပညာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ အဘယ်အရာကိုသူတို့သညျဘုရားသခငျသညျဘုရားသခငျ၏အသိပညာသို့မဟုတ်နီးဖြစ်စဉ်းစားပါလျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုအဆိုပါအာရုံ-မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်၏, ဒါမှမဟုတ်ထောက်လှမ်းရေး၏နေသောမျက်မှောက်, ကြားနာ, အရသာသို့မဟုတ်အနံ့၏အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်နေသည်။
သဘာဝ: သတိမရှိသောယူနစ်စုစုပေါင်း၏ရေးစပ်တဲ့စက်မူကား, သာမိမိတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်တာအဖြစ်သတိဖြစ်ကြောင်းယူနစ်။
လိုအပ်ချက်: ဘုရားကိုမကိုးကွယ်သို့မဟုတ်လူတို့သညျအဘို့အဘယ်သူမျှမလွတ်မြောက်လည်းမရှိရာမှကြမ္မာ, ဆွဲဆောင်မှုအရေးယူမှု, များသောအားဖြင့်ချက်ချင်းဖြစ်ပါသည်။
စုံလင်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်: အဆုံးစွန်သောပြည်နယ်သို့မဟုတ်အခွအေနေဖြစ်တယ်, ပြီးပြည့်စုံသော, အရာထံမှဘာမျှမပျောက်စေနိုင်သည်, မရာဘာမှဆက်ပြောသည်နိုင်ပါတယ်ရန်။ ထိုသို့သော၏ဘုံထဲမှာ Triune ကိုယ်ပိုင်၏ပြီးပြည့်စုံသော sexless ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပါသည်
ဥစ္စာ: အစားအစာ, အဝတ်အစား, အမိုးအကာနှင့်အသက်တာ၌၎င်း၏အနေအထားတွင်တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နည်းလမ်းကဲ့သို့သောလိုအပ်သော; ဤအရာပိုလျှံနှင့်အခြားအရိုအသေအတွက်သူတို့ကျော့ကွင်း, ဂရုစိုကျနှင့်ခြေချင်းဖြစ်ကြ၏။
Pranayama: မြောက်မြားစွာအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်သောတစ်ဦး Sanskrit အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့ကျကျပြုလုပ်ထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအသက်ရှူ၏တိုင်းတာရှူရှိုက်မိ၏သတ်မှတ်လေ့ကျင့်ခန်းအသုံးပြုပုံရပ်ဆိုင်းမှု, ကုတျ, ရပ်ဆိုင်းမှု, တဖန်ယင်းကဲ့သို့ကျည်တစ်အချို့အရေအတွက်သို့မဟုတ်အချိန်ကာလတခုအခြို့သောကာလအတွက် inhalation ဆိုလိုတယ်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ Patanjali ၏ယောဂန္တာန်တိခုနှစ်, pranayama ယောဂ၏ရှစ်ထစ်သို့မဟုတ်အဆင့်စတုတ္ထအဖြစ်ပေးထားသည်။ pranayama ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ prana များ၏ထိန်းချုပ်မှု, ဒါမှမဟုတ်အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖြစ်ဟုဆိုသည်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ပေါ်အသက်ရှူသို့မဟုတ် prana အပေါ်ညွှန်ကြားနှင့်အသက်ရှူအတွက်မှတ်တိုင်များကြောင့်သို့သော် pranayama များ၏အလေ့အကျင့်, ရည်ရွယ်ချက် confuses နှင့်အနိုင်ယူ။ အသက်ရှူ၌ဤစဉ်းစားတွေးခေါ်များနှင့်ရပ်အစစ်အမှန်စဉ်းစားတွေးခေါ်ကာကွယ်ပေးသည်။ မိမိအများ၏ဘာသာရပ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်ရှူ၏သဘာဝနှင့်ပုံမှန်စီးဆင်းမှုရပ်တန့်ခြင်းဖြင့်စီးဆင်းရာမှတားဆီးစဉ်းစားတွေးခေါ်-သောတွေးခေါ်နိုင်ဖို့ကိုထင်ရှားစေခြင်းအတှေးအချေါ-in ကိုအသုံးပြုကြသည်ကိုသိတတ်သောအလင်း။ သိအလင်းကိုသာ inbreathing နှင့် outbreathing နှင့် outbreathing နှင့် inbreathing အကြားနှစ်ခုကြားနေအချက်များမှာဝင်။ အဆိုပါထစ်ငေါ့အလင်းထွက်တတ်၏။ ထို့ကွောငျ့အဘယ်သူမျှမအလင်း; အဘယ်သူမျှမအစစ်အမှန်စဉ်းစားတွေးခေါ်; အစစ်အမှန်ယောဂသို့မဟုတ်ပြည်ထောင်စုမျှ; အဘယ်သူမျှမအစစ်အမှန်အသိပညာ။
ပွနျလညျ: မျိုးဆက်သစ်များ၏တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်, ကိုယ်ခန္ဓာ၏ပှားဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်: ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုးများကူးစက်ဆဲလ်များတို့သည်ဤလောကသို့အခြားခန္ဓာကိုယ်ရောက်စေဖို့ပေမယ့်ခန္ဓာကိုယ်သည်အသက်သစ်တစ်ခုနှင့်အဆင့်မြင့်အမိန့်ကိုပြောင်းလဲနှင့်မပေးရန်အသုံးပြုကြသည်။ ဒါဟာလိင်၏တှေးမြားကိုစိသို့မဟုတ်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်းစားမရသဖြင့်ပြည့်စုံသောပြည့်စုံခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသော sexless ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့မပြည့်စုံသောအထီးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်မှခန္ဓာကိုယ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်တဦးတည်းဖြစ်၏ ထိုသို့လာသောထံမှမူရင်းစုံလင်သောပြည်နယ်မှတဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်အသစ်တဖန်မွေးဖွားဖို့ persistent စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားကိုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဝိညာဉျသ: အမြဲတမ်းလူ့ဆက်နွယ်နေတဲ့၏အစိတ်အပိုင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်ဖို့အကူအညီခဲ့သည့်သူ၏မူလအစနှင့်ကံကြမ္မာကိုအမျိုးမျိုးဘို့မှတ်ခဲ့ကြတခါတရံဘာသာတရားနှင့်အတွေးအခေါ်များ၏အစဉျအမွဲတစ်ခုခု, သနေိုငျဖွစျဖို့ကဆိုပါတယ်နှင့်အခြားအချိန်များတွင်အသေသတ်ခြင်းကိုခံရကလည်း, ဒါပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်။ ဒါဟာတိုင်းလူ့ခန္ဓာကိုယ်၏အသက်တော်-ပုံစံ၏ပုံစံသို့မဟုတ် passive ဘက်ဖြစ်၏ သူ့ရဲ့တက်ကြွဘက်အသက်တော်သည်။
အဆိုပါပြုသော-in-the-ခန္ဓာကိုယ် spasmodic နှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်အတွက် unsteady ဖြစ်၏ ယင်း၏ခံစားချက်-and ဆန္ဒ-စိတ်ထဲတွင်သဘောတူညီချက်ထဲမှာအမြဲမဟုတ်, မိမိတို့စဉ်းစားတွေးခေါ်သည့်အာရုံမှတဆင့်နှင့်အာရုံ၏အရာဝတ္ထု၏ထင်သောခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ အစားကြည်လင်သောအလင်းနဲ့အတူနှင့်, အတှေးအချေါတစ်မြူနှင့်မြူအတွက် diffused အလင်းနှင့်အတူအများအားဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး, ကမ္ဘာ့လူ့ယဉ်ကျေးမှုအတှေးအချေါကဖန်ဆင်းသောအကြံအစည်၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ဖြစ်ကြောင်းမသေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတိဖြစ်လာဖို့, အစားကထိန်းချုပ်ထားခံရထိန်းချုပ်ဖို့, သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ထဲတွင်လူ့အလောင်းတွေအတွက်ကိုကျင့်သောသူသာလျှင်အချို့တို့က, သူတို့ထို့နောက် egendary ထက်သာလွန်သည်ကိုလမ်းတစ်ဥယျာဉ်တော်သို့မွကွေီးပျေါမှာကိုဖွင့်နိုင် ပရဒိသု။
ဒါက Thoughts Create မဟုတ်စဉ်းစား, ဒါက, Destiny Is: အဘယ်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထင်သနည်း, မိမိအအာရုံသူ့ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဖြစ်ရပ်များ, သူတို့ကိုရန်သူ၏တုံ့ပြန်မှုအကြောင်းကို, ထိုအာရုံ၏အရာဝတ္ထုတွေအကြောင်း, စဉ်းစားရန်အတင်းအကျပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကထင်၏။ သူထင်သည့်အခါထိုမင်းအရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့တစ်ခုခုဖြစ်ဖို့, ဒါမှမဟုတ်အရသို့မဟုတ်တစ်ခုခုရှိသည်ဖို့လိုသည်။ သူလိုလား! သူလိုလားသည့်အခါသူလိုလားအရာကိုကိုယ်တိုင်နှင့်အတွေးထဲတွင်အလင်းအလေးထား; သူကတစ်ဦးအတွေးဖန်တီးထားသည်။ သူ၏စဉ်းစားတွေးခေါ်သူအလင်းလုပ်ဆောင်ချက်၏ကိစ္စနှင့်သင်တန်းပေးဖို့, ဒါမှမဟုတ်သူကလိုလားအရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်အရာမှ, လိုလားသူ၏အလိုဆန္ဒနှင့်အတူ welded ကြောင်းဆိုလိုသည်။ ကြောင်းအတွေးအားဖြင့်သူကပူးတွဲနှင့်အလင်းနှင့်မိမိကိုမိမိခညျြနှောငျခဲ့သညျ။ ထိုမင်းသည်အစဉ်အဆက်ကြောင်းနှောင်ကြိုးကနေအလင်းနှင့်မိမိကိုမိမိလွတ်မြောက်နိုင်မှသာလမ်း unattached ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်; ကြောင်းဖြစ်ပါသည်, သူသည်အရာကနေအလင်းနှင့်သူ၏အလိုဆန္ဒလွတ်မြောက်စေဖို့အသုံးပြုပုံသူ့ကိုချည်နှောင်သောအတွေးဟန်ချက်ညီရမယ် လိုချင်တပ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကပုံမှန်အားဖြင့်နားလည်ရန်, သင်ယူဖို့မရေမတွက်နိုင်တဲ့အသက်ပေါင်းများစွာ, အသက်အရွယ်မရွေး, ကြာ; သူဘောင်း, မတွဲမနိုင်လျှင်အဖြစ်ပေးသောသူပူးတွဲခြင်းနှင့်ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ရှိသည်ဖို့အရာနှင့်ဝသကဲ့သို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အဖြစ်ကောင်းစွာပြုမူခြင်းနှင့်မနိုင်ကြောင်းနားလည်ရန်။ သင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒဖြစ်ပါသည် သငျသညျ! သင်လုပ်ချင်တဲ့အရေးယူသို့မဟုတ်အရာသငျသညျမဟုတျပါဘူး။ သင်တစ်ဦးအတွေးကမှကိုယ့်ကိုယ် attach နှင့်ခညျြနှောငျ အကယ်. န့်အသတ်များနှင့်ပူးတွဲမှုမပါဘဲဆောင်ရွက်ရန်အခမဲ့လျှင်, သင်အဖြစ်ပြုမူလို့မရပါဘူး။ ထို့ကြောင့်, အတှေးအဖန်တီးမသင့်သောအတှေးအချေါထင်အခမဲ့ဖြစ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်ပြီး, မလိုချင်ဖို့, ပွီကိုင်ထားပေမယ်သင်သည်အဘယ်သို့ရန်, သငျသညျအဘယျငှါ, လုပ်ရပ်မှခညျြနှောငျခံရဘဲ, ကိုင်ထားရန်, ရှိသည်, အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ကိုင်ထားပါ။ အဲဒီလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်စဉ်းစားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါသင်သည်ရှင်းလင်းသောအလင်းနှင့်အတူ, တန်ခိုးနှင့်အတူ, ရှင်းလင်းစွာစဉ်းစားနိုင်ပါ။
ယူနစ်, တစ်ဦးက: တစ်ဦးအလျားလိုက်အချင်းအားဖြင့်ပြထားတဲ့အတိုင်းတစ်ဦးခွဲခြားခြင်းနှင့် irreducible တဦးတည်းအနေနဲ့ unmanifested ခြမ်းရှိပါတယ်ထားတဲ့စက်ဝိုင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဒေါင်လိုက်လိုင်းအားဖြင့်ပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ်ထွန်းခြင်းဘက်တစ်ဦးတက်ကြွပြီး passive ခြမ်းရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်အပြောင်းအလဲများနှစ်ဦးစလုံးကနေတဆင့် unmanifested ၏ရှေ့မှောက်တွင်အားဖြင့်ထိခိုက်နေကြသည်။ တိုင်းယူနစ်အဆုံးစွန်အဖြစ်မှန်-သိစိတ်ကို-ဖြင့်၎င်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုအစဉ်အဆက်အတွက်သတိဖြစ်ခြင်းအတွက်နှင့်တသားတဖြစ်လာ၏အလားအလာရှိပါတယ်